गुनासो प्रतिवेदन आयो, तर नाम अर्कैको - Awajonline Online Newspaper
गुनासो प्रतिवेदन आयो, तर नाम अर्कैको
दोलखा, ९ माघ
भीमेश्वर नगरपालिका ४ बस्ने विष्णुबहादुर गुरुङको नाम भुकम्प पीडित नै भएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निमार्णण प्राधिकरण गुनासो सुनुवाइ प्रतिवदेनमा समावेश भएर आयो । गुरुङको प्राविधिकले जाँच गर्दा दिएको निस्सा नं., घर नं. र सम्झौता नम्बर समेत उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन अनुसार गुरुङ भुकम्प पीडित पक्का भए र आवास पुनर्निर्माणका लागि पनि राहत पाउँनेमा संका रहने ठाउँ नै छैन ।
भीमेश्वर ४ मा विष्णुबहादुर जस्तै रोजकुमार न्यौपानेको पनि गुनासो सुनुवाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विष्णुबहादुर र रोजकुमारी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विष्णुबहादुर र रोजकुमारी जस्तै विमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ मा गुनासो समाधान भएका डेढ दर्जन नाम मध्ये गुरुङ र न्यौपानेहरु मात्र एक दर्जन बढी छन् । तर स्थानीयहरु आफ्नो वडामा गुरुङ र न्यौपाने थर भएका मान्छे नै नभएको बताउँछन् ।
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले एक वर्ष लगाएर भुकम्प पीडितहरुको गुनासोको छानविन गरेको प्रतिवेदन जिल्ला जिल्लालाई पठाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भुकम्प पीडित १२ जिल्लाका ७० हजार ५ सय ११ गुनासोको छानविन गरी टुङ्गो लगाएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, दोलखा धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, रसुवा, रामेछाप, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली जिल्लाको गुनासोको प्रतिवेदन दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार १२ जिल्लाका ७० हजार ५ सय ११ गुनासो मध्ये २ हजार ३२ मात्र पुनरावलोकनबाट कामय भएका पुननिर्माण लाभग्राही भनेर उल्लेख छ । त्यसमध्ये दोलखाको १६ हजार ६ सय ५१ गुनासोको छानविन गर्दा ६ सय १९ जना मात्र लाभग्राही हुने उल्लेख छ ।
तर प्रतिवेदनमा आएका नामावली हेर्दा अधिकाँश नाम स्थानीयस्तरमा नभएका र स्थानीय गुनासो गर्ने पीडित नै नभएको देखिएको छ । गुनासोको सुनुवाइ भएको प्रतिवदेन दोलखा जिविसको गुनासो सुनुवाइ शाखामा शुक्रबार अबेर प्राप्त भएको हो ।
तर प्रतिवेदन आएको खबर पाउँने वित्तिकै जिविसमा आफ्नो र आफन्तको नाम प¥यो कि परेन भनेर सोधपुछ गर्न आउनेहरुको लर्को नै लागे तापनि कर्मचारीहरु आफैं नजवाफ बनेका छन् । ‘प्रतिवेदन आयो भन्दा आएको छ, तर कसको नाम आयो भनेर सोधे भने जवाफ दिने ठाउँ नै छैन’ जिविसका एक कर्मचारीले भने ‘यो प्रतिवेदनमाथि थप छलफल हुन बाँकी रहेकाले के गर्ने भन्ने पछि टुङ्गो लाग्छ ।’
लाभाग्राही सुचीमा पाउने गरी चंखुको शेर्पाहरुको बस्ती मात्र भएको ठाउँमा कोइराला, दलितको बस्ती भएको ठाउँमा क्षेत्री बाहुन र जनजातीहरुको नाम उल्लेख छ । स्थानीयहरुको अनुसार प्राधिकरणबाट आएको नामावलीमा कुनै पनि नाम नमिल्ने बताउँछन् ।
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले एक वर्ष अघि एक एनजिओ मार्फत जिपिएस प्रविधि जडित उपकरण दिएर घरघरमा इन्जिनियरहरु पठाएर घर निरीक्षण गरेको थियो । उक्त निरीक्षणपछि आफ्नो नाम नआएको भन्दै २१ हजार ७ सय १२ जनाले गुनासो फाराम भरेका छन् । तर गुनासो प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम आउँला भनेर आशावादी भएका भुकम्प पीडितहरुलाई गुनासो छानविन प्रतिवेदनले झन निराश बनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उप क्षत्रीय कार्यालय चरिकोटका प्रमुख सागर आचार्यले सुरुमा आएको प्रतिवेदन गलत भए पनि पुनः माथि जानकारी पछि अर्को प्रतिवदेन आएको बताए । अर्को प्रतिवेदनको पनि थप अध्ययन गरिरहेको बताए ।
दोलखामा २ गाविसका लाभग्राहीले अहिलेसम्म आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बुझेका छैनन् । शैलुङ्गेश्वर गाविसबासीले छुटेका लाभग्राहीको गुनासो समाधान नभएसम्म कसैले पनि बैंकबाट रकम बुझेका छैनन् । त्यसैगरी भेड्पू गाविस सिंगै हालसम्म नापी नभएकाले भेड्पूबासीको लाभग्राहीमा नामै छैन् । भेड्पूको आधाभन्दा बढी भाग गुठीको नाममा भएकाले सिंगो गाविस अहिलेसम्म नापी हुन सकेको छैन ।
भेड्पूको समस्या समाधानका लागि नेता र प्रशासकले स्थानीयस्तरमा विभिन्न आश्वासन दिने गरे तापनि हालसम्म समस्या जिउँका तिउँ छन् ।